घरकै चामल खान मन्त्रीहरूलाई उर्दी | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार घरकै चामल खान मन्त्रीहरूलाई उर्दी
२०७७, २६ कार्तिक बुधबार ०९:४८
मन्त्रीहरुको आधा तलब काटिएपछि के खाने ? केले पाहुना पाल्ने ? कुरा त उठ्थ्यो होला । तर, कसैले मुख फोर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले उपाय पनि बताइदिएपछि अस्ति सोमबार साँझ ६ देखि ९ बजेसम्मको क्याबिनेट बैठकमा सबै चुपचाप रहे ।
Previous articleकहिले आइपुग्छ कुन खोप ?
Next articleदरबाङमा संक्रमतिको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा परेको स्बाब संकलन